Wholesale Front Idler Dulldozer vagadziri uye vatengesi |Pingtai
1.Muviri wevhiri wechigadzirwa chedu wakagadzirwa ne35SiMn nekuoma kweHRC55-58 uye yakadzika inosvika 6-8mm, iyo inonyanya kupfeka.Central shaft zvinhu zve42Crmo simbi haisi nyore kuputsika.Kuitira kuti hupenyu hwebasa hwechigadzirwa hurebe.
Zvinhu zvinoshandiswa muzvigadzirwa zvakawanda pamusika ndeye 50Mn uye 45 # simbi, iyo isingakwanise kusangana nezvinodiwa zvekupfeka kuramba uye zviri nyore kuputsika.
2.Tekinoroji yedu inoshandisa kugadzira uye kukanda kwakaringana, CNC vertical machining production.
Kukandira kwakaringana kunoita kuti muviri wevhiri uwedzere density, isina pores uye isiri nyore kubuda gasi.
CNC yakatwasuka muchina unoshandiswa kunyatso kudzora kwehukuru hwechigadzirwa uye kutsetseka kwepamusoro.Uye michina iri nani, kushanda kwakachengeteka, kugadzirwa kwakanaka kwakakwira,
3.Kudhirowa kwehunyanzvi hwechigadzirwa ndeye 1: 1 saizi yepakutanga.Izvi hazvizoonekwe kana mutengi wekutenga saizi kutsauswa kusaiswa.
4.Tine nyanzvi yeQC team, uye kutevera kuedzwa kwechigadzirwa, semi-yakapedza uye yakapedza kuongorora chigadzirwa uye kuburitsa mishumo.
Zvese zvigadzirwa zvine ID nhamba yavo.Kana vatengi vakapindura matambudziko echigadzirwa, isu tinowana inoenderana QC bvunzo yekuzivisa zvinoenderana nenhamba yeID yechigadzirwa, tsvaga dambudziko uye uuye nemhinduro.
Chii chinonzi IDLER basa?
The function of and idler is to guide the link links to running out of smooth and to prevent dislocation.Idlers inotakurawo huremu nekudaro kuwedzera matrack links ichidzikira pasi pressure.Panewo ruoko rwuri pakati rwunotsigira track link uye rinotungamira mativi maviri.Iyo idiki chinhambwe pakati peasina basa uye track roller, zviri nani kutaridzika.
IDLER ruzivo ruzivo
Tsanangudzo: CAT D11 FRONT IDLER DULLDOZER MINING OPERATION
Supply Ability: 1000 PCS / mwedzi
Nzira: Forging/Precision casting
Kuoma: HRC55-58, kudzika 6-8mm
Zvakapfuura: Carrier Roller Mining Operation
Zvinotevera: Sprocket Segment Yakagadzirwa
Bulldozer D155 Undercarriage Zvikamu OEM Track Ro...
Excavator Undercarriage Wear, Excavator Bucket Wear Parts, Excavator Bucket Kucheka Kumucheto, High Simba Bolt, Rubber Track Rollers, Bearing Track Roller,